खेलकर्मीको उपश्थितीले राजनिती पनि सुध्रन सक्छ | KhelkudNews.com
खेलकर्मीको उपश्थितीले राजनिती पनि सुध्रन सक्छ
Published on November 27, 2017, by Manoj Shiama - Posted in others, Slideshow 0
आसन्न प्रतिनिधी सभा निर्वाचनमा खेलक्षेत्रमा सक्रिय थुप्रै अनुहार पनि उम्मेदवार भएका छन् । यसै क्रममा नेपाली एथलेटिक्सका ऐतीहासिक ब्यक्तित्व गजराज जोशीको परिवारलाई पनि यस पटकको निर्वाचनको प्रभावले असर गरेको छ । नेपाली खेलकुदका विविध क्षेत्रमा योगदानमा गरेका गजराज पुत्र मनीष जोशी काठमाडौं क्षेत्र नम्बर पाचमा प्रदेश सभा तर्फ ँ समानुपातीक उम्मेदवार बनेका छन् । टोखा भगवती क्लबका पूर्व अध्यक्ष मनीषको तेक्वान्दो, किक बक्सीङ, हाप्कीडो र भेट्रान एथलेटिक्सको क्षेत्रमा योगदान रहेको छ । तीनै मनीषसंग गरिएको कुराकानीको सार संक्षेप
खेलकुद र ब्यपारमा सक्रिय मान्छे राजनितीमा चाही कसरी यत्ति सक्रिय ?
मेरो पारिवारिक पृष्ठभुमिनै त्यसतो हो । मेरो बुवा गजराज जोशी खेलकुदको क्षेत्रमा ऐतीहासिक ब्यक्ति त हुदै हो । साथै उहाँ सामाजीक क्षेत्रमा पनि त्यत्तिकै सक्रिय । टोखाको विकास निमार्णको काममा उहाँको ठूलो देन छ । यसैकारण म ती सबै कुरालाई निरन्तरता दिन चाहन्थे । म बुवा जस्तै राम्रो र नाम चलेको खेलाडी त होइन । तर, विभिन्न क्षेत्रको ब्यबस्थापकीय जिम्मेवारी पुरा गर्दै म खेलकुदमा सक्रिय रहँे । सामाजीक रुपमा पनि सक्रिय रहन पर्छ र मेरो भुमिका हुनु पर्छ भन्ने लाग्यो । यसैकारण म यो क्षेत्रका सक्रिय रहेको हुँ । समाजमा केही गर्नु पर्छ भन्ने लागेर राजनितीमा प्रबेश गरेको हुँ ।
चुनाबी वातावरण कस्तो छ ?
उम्मेदवार क्षेत्र नम्बर पाचमा नेपालको चासो भएको क्षेत्र हो । दुइ नाम चलेका नेता उम्मेदवार हुनु हुन्छ । मलाई लाग्छ यस क्षेत्रमा हाम्रो पार्टीले पनि सही उम्मेदवार चयन गरेकाले सम्पूर्ण वातावरण फरक भएको छ । नेपालको एक जना राम्रो अर्थशास्त्री डा. प्रकास शरण महतलाई आफ्नो क्षेत्रको उम्मेदवार पाउदा खुसी छौ । यसले हाम्रो पक्षमा चुनाबी वातावरण राम्रो बनेको महशुष भएको छ ।
खेल र राजनितीमा फरक पाउनु भयो नी ?
हामीले खेलकुदमा एकखाले अनुशाषन र संस्कार देखेका छौ । जुन अनुशाषन र सस्कार राजनितीमा छैन । म राजनितीक क्षेत्रमा जुन दलमा जुन स्थानमा रहे पनि यसै खाले सस्कार सबैको रहोस भन्ने चाहन्छु । मैत्रीपूर्ण प्रतिस्पर्धा र हार्दीकतापूवर्क परिणामलाई स्वीकार गर्ने परम्परा हाम्रो चाहना हो । राजनिती अलि घिन लागदो भएको छ । अब हामी नयाँ पुस्ताको प्रयास यसलाई सुधार गर्न आबस्यक गर्न मा रहननै पर्छ । खेलकर्मीको राजनितीमा उपश्थितीले यो सुधार गर्न सहयोग पुग्छ भन्ने लाग्छ ।